Chantal Online Casino Sites - Online Casino Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > Ebe Ntanetị nke Ndị Rom na Romania
Loading ... Ụdị ịgba chaa chaa nile dị na Romania taa bụ iwu zuru oke na ebe niile. Obodo ahụ nwere ogologo oge nke ịgba chaa chaa iwu na-akwadoghị kemgbe 1906, mgbe e kere Lottery Lottery Romana. N'oge ọchịchị ọchịchị Kọmunist n'okpuru Nicolae Ceausescu ịgba chaa chaa kwuru na iwu akwadoghị, ma na 1990, a kwaturu ọchịchị ahụ, ịgba chaa chaa kwadoro ọzọ. Alakụba mbụ na post-Communist Romania, meghere na 1991.
Taa na Romania maka ihe karịrị 20 casinos, yana ihe karịrị 20,000 slot machines, nke dị na ụlọ ahịa, ebe obibi na ebe ndị ọzọ na obodo. Ịkụ nzọ egwuregwu na-abụkwa iwu zuru oke, na n'ọtụtụ obodo ukwu ndị Rom, ị nwere ike ịhụ ndị na-ede akwụkwọ nwere nnukwu osisi. Omenala ịgba chaa chaa na Romania na-eto ngwa ngwa, ụlọ ọrụ dị ugbu a na mba ahụ dị nnọọ elu.
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Romania
Ịgba chaa chaa na ịgba chaa chaa na Romania na nso nso a ka iwu kwadoro na National Agency maka ịgba chaa chaa (National Gaming Office) April 4, 2013. Tupu nke a, ịgba chaa chaa n'ịntanetị bụ nke iwu kwadoro ebe ọ bụ na 2010, mgbe a gafere iwu ahụ na-akwado saịtị ịgba chaa chaa n'ịntanetị na Romania, na-enwe ikikere ala. Otú ọ dị, na enweghị ikike ịchịkwa iwu nakwa na iwu nke ịgba chaa chaa na Romania, ndị ọrụ ahụ enwebeghị ike itinye akwụkwọ.
Taa, na mba a, e nwere ọtụtụ casinos ndị mba ọzọ maka ndị Rom. Rịba ama na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ mpaghara ahụ natara ikikere na 2014. Ndị na-ede akwụkwọ n'Ịntanet na-ewu ewu na Romania, mana ọzọ ọ bụ ndị isi mba ọzọ na-enweghị ikikere Romanian.
Nchịkọta nke saịtị Ntanetị Ntanetị nke 10 kachasị elu
Ịgba chaa chaa na Romania
Romania - Oké Osimiri Uhie bụ ebe mara mma, ndagwurugwu anwansi nke Danube, ọtụtụ ọdọ mmiri na ugwu ndị mara mma, mmụọ nke ịhụnanya ịhụnanya na akụkọ ifo. Ma ọbụna onye njem niile nhọrọ dị njikere mgbe ọ na-abịa ịgba chaa chaa, n'ihi na ha na-ekwe na mba na-egosi na ya niile di iche iche. Ndị CasinoToplists zigaara Bucharest ịmara ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na Romania.
Romania - ebe e nwekwara obere akụkọ ihe mere eme;
Iwu na ikikere;
Ugbochi oke maka ụlọ ọrụ cha cha.
Ụlọ ihe nkiri kachasị ama na Romania:
netwọk Olympic Casino;
Ịgba chaa chaa chaa chaa chaa: bụ iwu ma ikike obodo na ndị mba ọzọ;
Ise ise nke Romania na Bucharest na adreesị nke isi obodo;
Ezigbo ihe banyere Romania na ndị Rom.
Ọnọdụ Romania na akụkọ ihe mere eme nkenke
Romania dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Europe. Taa, ọ bụ mba ndị omeiwu nke President Klaus Johannis na Prime Minista Victor Ponta na-achị. Isi obodo nke mba a bụ obodo ochie Bucharest.
Ógbè Croatia bụ Cro-Magnon biri na 42 000 ọzọ afọ gara aga. N'oge Alaeze Ukwu Rom dị iche iche bụ akụkụ nke ya. Site n'ụzọ, a na-asụgharị aha nke oge a dị ka "Roman".
Na Middle Ages Romania bụ Transylvania, Moldavia na Wallachia. N'ihi agha ndị dị n'ókèala ndị dịgasị iche iche bụ akụkụ nke Alaeze Hungary na Alaeze Ukwu Ottoman.
Na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri na itoolu, ụkpụrụ Romania na-aghọ ókèala. Ọ bụ nanị na narị afọ nke iri abụọ ka akwụkwọ malitere. Mgbe Mgbanwe nke Rom na 1989 malitere usoro ọhụụ ọhụrụ.
Ebe ọ bụ na 2004 Romania bụ onye òtù NATO, nakwa ebe 2007 - so na EU.
Cha cha na ịgba chaa chaa na Romania
Akụkọ banyere oge ịgba chaa chaa na Romania na-abịa azụ na 1990. Mgbe ala kwụsịrị Ceausescu, mba ahụ laghachiri n'ahịa ịgba chaa chaa. Ọ bụ ezie na mbụ enweghi iwu iwu, ha malitere ịpụta na 1991 na ọbịbịa nke Casino Aistria Austrian Company nke kere mbụ isi cha cha na isi obodo.
Na 1992, ọ pụtara na Commission Gaming, nke gbasoro ọrụ nke ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa niile. Na 1993 ọ nakweere iwu gbasara ụtụ maka casinos. Ịgba chaa chaa mara ezigbo mma na gọọmentị ndị Rom nyere aka na ikikere ikike na 1998. A kọwara ihe a nile n'ime iwu "Na nhazi nke ịgba chaa chaa."
Ebe ọ bụ na 1999, achọrọ ndị nwe ụlọ ịgba chaa chaa na ịchọrọ ikikere, ịhazi cha cha na ụlọ ndị dị iche iche, ụlọ oriri na nkwari akụ ma ọ bụ na ha anaghị arụ ọrụ ha na cinemas.
Na Romania, kwere ịgba chaa chaa ọtụtụ ụzọ:
egwuregwu na tebụl: egosighị egwu, ike, baccarat, blackjack, ruleti, Punto Blanco;
Betting: ịkụ nzọ, ụlọ ọrụ ịkụ nzọ;
egwuregwu site na iji telifon na Intanet.
Iwu ahụ siri ike ruo ndị na-ahazi ntụrụndụ ịgba chaa chaa. Biko lee anya maka ime ụlọ, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ mgbakwunye, oche, egwuregwu etemeete na ihe ndị ọzọ. Enweta ikike na ọ bụghị nanị na omume nke azụmahịa onwe ya, kamakwa nke ikikere nke ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa ọ bụla. Dịka, ikikere dị irè maka oge
1-5 afọ. Mgbe ụbọchị ndị a gasịrị, ị ga-enyochaghachi ọzọ, zụta ikike ọhụrụ.
N'ihi na ndị ọrụ niile nke ịgba chaa chaa na-eme ka afọ ole na ole, dịka ọmụmaatụ, maka ndị nduzi - site na 23 afọ. E nwere ọtụtụ ihe iwuchibido metụtara akụkọ mpụ ma ọ bụ ọrụ na-arụ ọrụ obodo.
Tupu e mepee cha cha chaa, ọ dị mkpa ịmepụta ego ego. A na-agbakọ ya n'otu n'otu.
Popular cha cha Romania
Na Romania, ọtụtụ casinos na-agbaso ụkpụrụ ụwa. O doro anya na otu n'ime ihe ndị a kachasị dịka ya dị ka cha cha cha cha. Ọ na-agụnye ụlọ ọrụ 9, nke na-eji ndị 3000. Network - onye so na European Casino Association. Ndị ọbịa na-enweta ọnọdụ kachasị mma iji kpọọ ịgba chaa chaa ọ bụla.
Casino Bucharest - otu n'ime casinos ndị a ma ama na Bucharest, nke dị nso na obodo ukwu na ụlọ nkwari akụ 5 kpakpando Intercontinental Hotel. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na mbara igwe: ime ụlọ na-enweghị atụ, ọrụ a zụrụ nke ọma, nri dị mma - naanị ihe ị chọrọ maka egwuregwu dị mma. Na 14 na-arụ ọrụ na Casino Bucharest na tebụl egwuregwu 4 na blackjack, tebụl roulette 7.
Mirage Casino - ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ site na 2003. Ọ na-esote na nkwari akụ Ambassador Hotel na Magheru Boulevard. Ụlọ owuwu ihe dị n'ime square 1000, e nwere ụlọ abụọ VIP. E nwere tebụl na-egwu egwu 12, ị nwere ike ịme nkwụsị malite na 1 euro.
Havana Princess Casino dị na etiti obodo, na-ebi na square 1200. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ọkachamara a zụrụ azụ, na-eje ozi na tables 12 na egwuregwu. Casino na-elekwasị anya na ndị ọbịa si mba ọzọ, nke a na-akpọkarị ndị njem site na ya China na toro toro.
Online casinos na Romania
Akụkọ banyere online casinos na Romania dị nnọọ njọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ na 2015 ka a na-agba chaa chaa na-eme ka a na-agba ọsọ, n'ezie na ndị sava Romania nwere ogologo oge ejiri egwu. Kwa afọ site na mmefu ego na-agafe ruo ọkara ijeri euro.
Legalize online casinos agbalịwo kemgbe 2009, kwa afọ, na-eweta ụgwọ ọhụrụ. Mana enweghi mmefu ego na 2014 mere ka gọọmentị gọọmenti kwenye. Ugbu a, n'ókèala Romania nwere ike igwu egwu na saịtị ndị ịgba chaa chaa kachasị amasị gị.
Ebe nkiri Bucharest
Athenaeum Romanian . Adreesị: Strada Benjamin Franklin 1-3, Bucureşti. Nke a bụ nnukwu ụlọ oriri egwu nke mba ahụ, nke a na-akpọkarị Bucharest. E wuru ụlọ ahụ na 1888 na ụdị na-ahụkarị ọcha nke eclecticism. Ime nke pụrụ iche na akụ na ụba.
Ụlọ nke nzuko omeiwu . Adreesị: Strada Izvor 2-4, Bucureşti. Ala na ugwu Spiro - ihe nlereanya kachasị mma nke oge mmekọrịta mmadụ na ibe, na-ebu Bucharest na mita 86, ma hapụ ala na 92 mita.
National Village Museum . Adreesị: Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 28-30, Bucureşti 011347. Ụlọ 272 na-ekpuchi si n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ.
National Museum of Art of Romania . Adreesị: 49-53, Calea Victoriei, 010063 Bucureşti. Nnukwu ụlọ ngosi ihe ochie nke European na Romanian nkà na 3,000 ngosi na 60,000 reservists.
Herăstrău Park . Adreesị: Sector 1, Bucureşti. Ntọala na 1936 na ọdọ mmiri ọdọ mmiri nke dị na ugwu Bucharest.
Ezigbo mmasị gbasara Romania na ndị Rom
Bucharest kpọrọ Little Paris nke East.
A wuru Castle nke Ala na narị afọ nke iri na abụọ - ebe ndị njem nleta kachasị ewu ewu na mba ahụ, ebe ọ bụ na a na-ewere ya na ọnụ ọgụgụ ndị Count Dracula.
Romania nwere Ụbọchị Nwepu - 9 May. Ma nke a abughi ụbọchị mmeri na Agha Ụwa nke Abụọ, ụbọchị nnwere onwe si n'Alaeze Ottoman, nwetara na 1877.
Romania na map nke Europe:
0.1 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Romania
0.2 Nchịkọta nke saịtị Ntanetị Ntanetị nke 10 kachasị elu
3 Ịgba chaa chaa na Romania
3.0.1 Ọnọdụ Romania na akụkọ ihe mere eme nkenke
3.1 Cha cha na ịgba chaa chaa na Romania
3.1.1 Popular cha cha Romania
3.2 Online casinos na Romania
3.2.1 Ebe nkiri Bucharest
3.2.2 Ezigbo mmasị gbasara Romania na ndị Rom
3.2.3 Romania na map nke Europe: